Inkqubo yobugcisa - i-Shandong Yuqiang Hardware Products Co, Ltd.
Itshathi yoLawulo lweTshathi yokuhamba
Ukuveliswa kovavanyo lweMveliso
Uvavanyo lokuqala lwento
Amakhadi esiza kwaye ahlole isampulu kwaye ahlole imathiriyeli, inkangeleko kunye nolwakhiwo
Indlela engalunganga yonyango lwemveliso: □Ukukhetha kwakhona; □Faka isicelo sokukhutshwa; □Ukunyenyiswa nokwamkelwa;
Qaphela: 1. Iimveliso ezingalunganga ezigqitha kwi-10% yovavanyo lokujikeleza ziya kufuna ukuvala imveliso ngokukhawuleza kwaye zenze indawo yokubonisa embi. Bhala kwiphepha lokusingathwa kwemeko esemgangathweni kumphathi.
Yiya kwiNkqubo elandelayo
Uvavanyo lweSampulu yovavanyo
Izinto ezibonakalayo, inkangeleko, ulwakhiwo zilungile, izinto ezingenasiphako, ukuhlolwa kunokugcinwa emva kokusayinwa kuluhlu lokugcina.
Ukunyathela itshathi yoLawulo lweTshathi
Itshati yokuKhwela uMgangatho wokuKhwela
Ukutshiza itshathi yoLawulo lweTshathi